Umkhosi wase-China ubonelela ngonyango ngakumbi ukunceda iLaos ukuba ilwe ne-COVID-19
ngomphathi ku 2021-04-24
Nge-17 kaDisemba ngo-2020, isikhumbuzo seminyaka engama-50 sokusekwa kobudlelwane bezopolitiko phakathi kwe China ne-Ethiopia yabanjwa eShanghai. Njengelungu lamashishini eShanghai International Chamber of Commerce, inkampani yethu yamenywa ukuba ithathe inxaxheba kulo msebenzi ...
Iqela le-UP kuko konke ukuprinta i-China 2020
Molweni nonke bahlobo, i-2020 Yonke into ekuPrinta iphele ngempumelelo. Ngexesha lomboniso, ukuprintwa kwelebheli yedijithali kunye nokusika ii-machineres kutsale ingqalelo yabaphulaphuli, enkosi kakhulu ngokuza kwethu.Sonke siyazi ukuba u-2020 ngunyaka onzima, lilungelo lethu elikhulu ukutshintshiselana ...
Umatshini wokuprinta we-LQ6090 / 9060
ngomphathi ku 2021-03-24
I-Q1: Ukuba awufuni ukusebenzisa intloko yokuprinta i-XP600, ungayitshintsha ibe yintloko yoshicilelo lweshishini? I-A1: Ngoku, sinokusebenzisa iintloko zokuprinta zikaRicoh kunye neentloko zokuprinta zeToshiba CE4. I-Q2: inyanga njani imprinta yakho? I-A2: Songeze izibane ze-UV kumacala omabini entloko yokushicilela, inokufikelela kunyango olukhawulezayo. Umbuzo: Whe ...
Umshicileli weT-shirt yeLQGA
I-Q1: Ngaba zonke iimpahla kufuneka zitshizwe ngolwelo lonyango? I-A1: Izikipa ezimhlophe azidingi kufafazwa ngonyango lulwelo, kodwa imibala emnyama kufuneka ibenje: eluhlaza, obomvu, omnyama, njl. I-A2: Ngokuyintloko shicilela iiT-shirts, ...
Umahluko phakathi kokushicilelwa kwedijithali kunye nokuprinta kwendabuko
Iphakheji kunye nokuprinta zizindlela ezibalulekileyo kunye neendlela zokuphucula ixabiso elongeziweyo leemveliso kunye nokonyusa ukhuphiswano lwazo. Njengenkqubo yetekhnoloji yokukopa kunye nokubhaliweyo, ikhule ngokukhawuleza ngenkqubo yetekhnoloji yokuvelisa kwaye iye yaba yinxalenye ebalulekileyo yobomi bethu. Ngoku ...
Isishwankathelo iingxaki eziqhelekileyo kumatshini ibhokisi
Umbuzo: 1. Uyintoni umahluko phakathi komshicileli wethu we-inkjet yekhatoni kunye nesiko? I-A1: Akukho mfuneko yokuba senze ipleyiti kwaye sidibanise i-inki njengokushicilelwa kwesiko. I-inki yethu iluhlaza kunye nokusingqongileyo Q: 2.Yintoni intloko eshicilelweyo esetyenziswa ngumatshini kwaye bubude benkonzo yayo? A2: Yamkela i ...
Ingeniso yemveliso yeRFID
I-RFID sisishunqulelo soLwazi lweRadio Frequency. Umgaqo kukunxibelelana kwedatha yokunxibelelana phakathi komfundi kunye nethegi ukufezekisa injongo yokuchonga ekujolise kuko. I-RFID inoluhlu olubanzi lwezicelo. Izicelo eziqhelekileyo njengangoku zibandakanya iichips zezilwanyana, i-chip chip anti-th ...
ZH1000D uvavanyo ngokuzenzekelayo lwegluer
Ngomhla kaNovemba 10, uSekela GM uMnu Gao watyelela mveliso yethu uvavanyo ZH1000D EZIZENZEKELAYO EFLAYO iflegi kwaye wenza ingxoxo enzulu amagcisa kunye nabathengi.
Masilwe ne-COVID-19 kunye
I-China ibuyela emsebenzini: Iimpawu zokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwi-Coronavirus Logistics: ukuqhubeka okuqinisekileyo kwemilinganiselo yeekhonteyina Icandelo lokwenza izinto libonisa ukubuyiswa kwe-China kwi-Coronavirus. Kwiveki yokuqala ka-Matshi, amazibuko amaTshayina ebene-9.1% j ...
Iqela le-UPG lithathe inxaxheba kwi-Label Expo South China 2020
Ngomhla we-8 ukuya kwele-12, iqela le-UPG lithathe inxaxheba kwi-Label Expo South China 2020. Ngexesha lomboniso, senze ufundo lwe-furthur yelebhile ekrelekrele kunye nokuprinta ukusuka kwi-19 yeengcali zelebheli nakwimizi-mveliso esenza sicace ngakumbi malunga neendlela ezizayo zophuhliso lweelebheli kunye yedijithali ...
Iqela le-UP lithathe inxaxheba kwi-China Plastics Expo ebibanjelwe eYuyao
China Plastics Expo (Mfutshane njenge CPE) ibibanjwe ngempumelelo kangangeminyaka engama-21 ukusukela ngo-1999 kwaye iye yaba ngomnye wemiboniso edumileyo nenempembelelo kushishino lweplastiki lwaseTshayina, kwaye ikwanika nesatifikethi seUFI ngo-2016.
I-8 Yonke ekuprintweni iChina iyeza! Jonga eBooth: N3B331 & N2B433
Konke kuShicilelo iChina 2020 iya kubanjelwa eSNIEC, eShanghai, eTshayina ngo-Okthobha u-12-16, 2020. Zonke kwiPrinta yeLifu zidibanisa imiboniso, umdlalo wokwenza umdlalo kunye nemisebenzi yokutshintshiselana ngemizi-mveliso, konke oku kunikezelwe phantse, ukuqala ngo-Agasti 10. Booth No. N3B331 yoshicilelo lwedijithali oomatshini ...